Soo -saaraha iyo Alaab -qeybiyeha Rinjiga Silsiladaha ee Shiinaha | Lixin
Dhalista rullaluistemadka cylindrical waa nooc ka mid ah dhalista kala -go ', fududahay in la rakibo oo la kala -diro. Saa'idka Kuwani waxay leeyihiin awood dhalista sare. Naqshadda qaab -dhismeedka cusub ee flange -ka iyo wejiga dhammaadka rullaluudka ma aha oo kaliya inay hagaajiso awoodda qaadista axial, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa xaaladda saliidda ee aagga xiriirka u dhexeeya wejiga dhammaadka rullaluudda iyo flange -ga, waxayna hagaajineysaa waxqabadka adeegga ee dhalista. Waxay u adkeysan kartaa culeysyo waaweyn oo radial ah waxayna ku habboon tahay hawlgal xawaare sare leh, sida matoorada waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah, tareenka iyo duubista, mashiinnada mashiinka mashiinnada, matoorada gubashada gudaha, matoorrada, wax-yareeyayaasha, mishiinnada rogista, iyo qaadista iyo gudbinta mashiinnada.
1. Cimri Dheer
Naqshadaynta shaabaddii asalka ahayd ee la qaatay si looga hortago faddaraynta iyo daadinta dufanka.
Waxaa ku jira dufan gaar ah oo loogu talagalay safafka heerkulka ballaaran iyo cimriga dheer.
2. Hawl -socod siman oo deggan
Heerka saxda ah ee qaybahayaga dhalista ayaa la xoojiyay si loo hubiyo hawlgal siman oo deggan.
3. Xuddunta hooseysa
Xuddunta wareegga hoose
Bilowga, waxaan la yeelan doonnaa xiriir macaamiisheena dalabkooda, markaa injineeradeena ayaa ka shaqeyn doona xalka ugu habboon ee ku saleysan baahida iyo xaaladda macaamiisha.
U shaqeynta si waafaqsan nidaamka tayada ISO 9001, qalabka wax soo saarka ee horumarsan, tikniyoolajiyadda farsamaynta casriga ah, nidaamka maaraynta tayada adag, shaqaalaha xirfadda leh iyo kooxda farsamo ee hal -abuurka leh, waxay ka dhigaan saamayntooda hagaajinta tayada joogtada ah & horumarinta teknolojiyadda.
KONTOROOLKA TAYADA (Q/C)
Iyada oo la raacayo heerarka ISO, waxaan leenahay shaqaale Q/C ah oo xirfad leh, aaladaha tijaabinta saxda ah iyo nidaamka kormeerka gudaha, xakamaynta tayada ayaa lagu fuliyaa geeddi -socod kasta laga bilaabo helitaanka alaabta ilaa baakadaha alaabta si loo hubiyo tayada qaadistayada.
Xirxirida dhoofinta ee caadiga ah iyo walxaha baakadaha ee deegaanka ilaaliya ayaa loo adeegsadaa raadkayaga, sanduuqyada caadada ah, sumadaha, barcode iwm ayaa sidoo kale la bixin karaa iyadoo loo eegayo codsiga macmiilkayaga.
Caadi ahaan, xirmooyinkayaga waxaa loo diri doonaa macaamiisha gaadiidka badda sababta oo ah culeyskeeda culus, hawo -mareenka, muujinta ayaa sidoo kale la heli karaa haddii macaamiisheena u baahdaan.
Hore: Rullaluislaha irbad
Xiga: Kubadda Aluminium
Rullaluistemadka Silsiladaha 20x47x14
Rullaluistemadka Silsiladaha 25x52x15
Rullaluistemadka Rinjiga ah 30x62x16
Row Double Rullaluistemadka rullaluistemadka
Afar Row Rinjiga rullaluistemadka
Madax Ball Check naxaas, Kubadaha Copper -ka Yar, Kubadda naxaasta, Kubbadda Naxaasta ee Adag, Kubadda naxaasta ee H65, H62 Kubadda Naxaasta,